Spartacus | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Spartacus | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
A atọ ezigbo ụtọ oghere egwuregwu na abụọ ukwu atụmatụ, Spartacus bụ nanị otu nke kasị mma online ohere mpere na-egwu. Ọtụtụ mmadụ na-ama mgbe na-egwuri egwuregwu a tupu iwebata ya mobile-enyi na enyi version. Nke a na-adọrọ mmasị ohere mpere egwuregwu bụ n'ihi nke WMS si creativity na mgbe nile na-agba mbọ na-enye-agba chaa chaa na ihe dị iche iche na ihe ka mma. Ugbu a, ọ na-enye gị a 5×4 ukwu na 5×12 colossal ezigbo oghere egwuregwu iji merie ụfọdụ nnukwu nwa anụmanụ si na mma nke na ekwentị mkpanaaka gị. I nwere ike na-atụle ya dị ka a abụọ na otu oghere egwuregwu na pụrụ inyere gị aka imeri nnukwu.
Prime nkiri nke a game:
All ndị nnọchianya na Spartacus ala stacked ụdị n'ihi na e nwere abụọ oghere esi anwụde, otu bụ 5×4 na ọzọ bụ 5×12 na 100 paylines. Ọ ga-abụ oké fun itinye gị ego na tojupụtara n'ihi na ị ga-utịp na a jackpot, ma ọ bụrụ na ị na-ịga nke ọma ọdịda emeri Nchikota. Game isiokwu onwe ya na-adọta ndị ịgba chaa chaa riri. Spartacus bụ a Romanian dike, onye mbụ a ohu onye ndú na mesịrị ghọọ a kpara Gladiator. Nke a egwuregwu na-echetara gị nke na oké warrior na WMS agbalịwo ya kasị mma ịzụlite egwuregwu gburugburu Spartacus ndụ.
Good na na na mbadamba na nnukwu meziri:
Spartacus Gladiator of Rome ohere mpere achọ nnukwu meziri. I nwere ike na-enweta ya na a ụzọ ka mma isi, ma ọ bụrụ na ị na-egwu ya na mbadamba nkume ma ọ na laptọọpụ. On obere meziri ya ọ bụghị ihe ọjọọ ezie n'ihi na ị na-enwe ịdị ebube nke isiokwu. Game Mmepe emebighị na isiokwu nke egwuregwu n'ihi na niile akara gbasa Spartacus. The n'okirikiri na-yiri ka a agha ụda na enwekwu mmasị nke ịgba chaa chaa riri.
Inwe njikere maka nnukwu Enwee Mmeri n'ihi na ha na-atụghị anya:
Spartacus Gladiator of Rome mgbe ahapụ gị ala n'ihi na ọ nọgidere na-ala ụfọdụ nnukwu akara na ukwu. Ọkachamara na-ekwu na a-agba chaa chaa nwere ike inwe ụfọdụ nnukwu Enwee Mmeri n'oge ọ bụla n'ihi na ọ na-atụ anya na egwuregwu a na ị nwere ike adaa emeri Nchikota ọzọ na ọzọ. Ọ na-enye gị 8 ma ọ bụ karịa free-spins, ma ọ bụrụ na ị na-ala anụ akara ke ukwu na ego n'anya gbasaa on 5×12 ukwu aka gị na-emeri ego. Ọ na-enye gị 8-20 free spins na-adabere na wilds i ala na-esi anwụde.
-Agba chaa chaa nwere ike igwu kacha nta nzọ nke 0.50p na kacha nzọ nke € 250. The kacha emeri ego na egwuregwu a bụ 1250 kwa akara nke bụ winnable ma ọ bụrụ na ị na-kechioma na-egwu na-eji amamihe.